Maxaa ugu wacan in malaayiin qof ay sidan ugu arkaan Koobka Adduunka? | Saxil News Network
Maxaa ugu wacan in malaayiin qof ay sidan ugu arkaan Koobka Adduunka?
July 11, 2018 - Written by editor
Image captionCiyaartii Ruushka iyo Sucuudiga iyo sida sawirka ula muuqanayo dadka la’ midabka aragga.
Sean Hargrave waa qof ciyaaraha aad u jecel, balse marka uu damcay in uu daawdo furitaanka koobka adduunka ee 2018-ka, waa uu kala saari waayay kuwa ay kala yihiin labada kooxood ee dheelaysa.
Kalama saari karo midabada cagaarka iyo guduudka, waxa dhana isku mid ayay ula muuqanayaan.
12 qof oo rag ahba, midkood ayaa qaba xanuunkan midab la’aanta aragga, dumarka 200 dumar ahba mid ka mid ah ayaa qabta.
Midab la’aanta aragga waa ay kala duwantahay, waana kala darantahay , qofka aadka u darana waxa ciyaartii Ruushka iyo Sucuudiga ula muuqan kartaa sawirka hoose, oo lala barbar dhigay sawirka rasmiga ah.
Lahaanshaha sawirkaAFP/GETTY IMAGES
Image captionSawirka u muuqanaya dadka la’ midabka aragga
Halka sawirka saxda ah uu yahay kan hoose.
Image captionSawirka saxda ah
Dadka qaba xanuunkan adduunka waxaa lagu qiyaasaa illaa 320 milyan oo qof, waxaana xitaa ka mid ah qaar ka mid ah ciyaartooyda laftooda, waxaana FIFA lagu eedeeyay in aysan waxbo ka qabanin arrinkan.
Dadka qaarkood ma kala garan karaan gool hayaha iyo garsooraha, sidoo kale ma arki karaan diilimaha dharka.
Marka ciyaarta ay noqoto rigooro ama gool-ku-laad, dadka la’ midabka aragga waxa ay ku dhibtoodaan in ay kala sheegaan middabada guduudka iyo cagaarka ee kasoo muuqda shaashadaha ee lagu tirakoobayo goolaha la kala dhaliyay iyo kuwa lala gafay.
Warbixin ka hadlaysa farxadda oo la soo saaray
Wasiirka Caafimaadka ee Mareykanka oo iscasilay
Katy Moran, 27 jir ah waxa ay u dheeshaa kooxda gabdhaha ee Aston Villa, waxa ay BBC-da u sheegtay in mararka qaarkood ay ciyaartooyga kale ka eegto iskaalsooyinka (sharabaatooyinka) si ay u garato kooxda uu yahay, gaar ahaan marka ay iyada ciyaaraha dheeleyso.
Waxa ay sheegtay in ay dhibaato tahay in qofka uu ciyaaraha guul ka keeno, maadaamaa waqtiga iyo fikirka inta badan uu kaga baxayo in uu kala garto dadka ciyaarta la dheelaya.
Lahaanshaha sawirkaASTON VILLA FOOTBALL CLUB
Image captionKaty Moran ooo u dheesha kooxda dumarka ee Aston Villa
Ciyaaryahanada xanuunkan qaba waxaa ka mid ah Thomas Delaney oo u ciyaara xulka Denmark.
Image captionThomas Delaney (safka hore, qofka koowaad dhanka midig xigga) ayaa ka mid ah ciyaartooyda la’ midabka aragga
Delaney ayaa raadiye ku yaala dalka Denmark u sheegay in uu la’yahay midabka aragga, isaga oo taageero u muujiyay qof taageere ah oo soo wacay raadiyaha, xanuunkaaska qaba.
Tan waxa ay keentay in kooxdiisa Denmark iyo kooxdii kale ee ay la dheelayeen ee Australia ay badalaan maaliyadda, waxayna xirteen dhar kayd u ahaa.
Waxa uu sheegay in dadka qaarkood aysan qiranin dhibaatada haysata, iyaga oo ka baqaya in kursiga ay waqti badan ku qaataan.
Image captionThomas Delaney ayaa sidoo kale u ciyaara kooxda Borussia Dortmund
Waxaa dadka u sahla in ay middabada arkaan xidid ama neerfo indhaha ku jira, waxana qofka uu arki karaa guduud, cagaar iyo buluugga qafiifka ah marka araggiisa uu caadi yahay.
Balse dadka qaar ayaa la’ qeyb ka mid ah saddexdaas maaddo, mararka qaarkoodna dhammaantood ayaaba qofka ka maqan.
Image captionTijaabo aragga ah
Ma jirto wax dawo ah oo arrinkan loo hayo, balse mararka qaar xal ayaa laga gaari karaa.
Dadka qaar oo si qafiif ah u beeley midabka aragga ma kala garan karaan in ay xanuunkaas qabaan, sababtoo ah waa ay ku dhasheen, mana ka warhayaan in dadka kale ay arkaan midab tiq ah oo ka duwan kan ay arkaan ee qafiifka ah.